चाँदीको मूर्तिसहित भारतीय पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
आश्विन २१, २०७४ देवनारायण साह
मोरङ — इलाका प्रहरी कार्यालय रानीले चाँदीको मूर्तिसहित एक भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ ।
भारतबाट अवैध रुपमा भन्सार छली ल्याउँदै गरेको चाँदीको मूर्तिसहित भारतको अररीया जिल्लास्थित जोगबनी ग्राम पञ्चायत-१ का १९ वर्षीय दीपक साहलाई पक्राउ गरेको हो । उनको साथबाट २ किलो १ सय ६२ ग्राम चाँदीको तयारी लक्ष्मीको मूर्ति ८, गणेशको ९, आचमनी १०, चम्चा १२, माछा ६, मुकुट २९ र पञ्चपात्रो ९ थान बरामद भएको रानी प्रहरी प्रमुख सन्तोष निरौलाले बताए । सिएस र बिएसके १०० ब्रान्डका उक्त मूर्तिहरु छन् ।
साहले गोजी नै गोजी भएको लुगाभित्र उक्त मूर्ति राखेर माथि अर्को लुगाएर आउँदै गरेको अवस्थामा विराटनगर-१५ स्थित हुलास मेटल चोकबाट पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक निरौलाले बताए । तस्करहरुले अवैध रुपमा लुकाईछिपाई चाँदीका तयारी गहनालगायत सामग्री यहाँका सुनचाँदी व्यवसायीलाई बिक्रीका लागि ल्याउने गरेको सूचनाको आधारमा रेकी गरेर पक्राउ गरेको उनले सुनाए ।
कारबाहीको लागि चाँदीसहित क्षेत्रीय राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीमा शनिबार बुझाएको जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुणकुमार बिसीले बताए ।
‘तस्करहरुले कुन पसलहरुमा उक्त तयारी चाँदीका सामग्रीहरु ल्याउने गरेको, कहाँ तयार गर्ने गरेको कति मिसावट रहेकोबारे थप अनुसन्धानबाट खुल्छ,’ उनले भने, यस्तो कार्यमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।’
तस्करहरुले अवैध रुपमा लुकाईछिपाई नेपालबाट काँचो चाँदी भारत लगेर ६० प्रतिशत मिसाबट गरी गहनालगायत सामग्री बनाएर नेपालस्थित सुनचाँदी पसलेहरुलाई दिँदै आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उनले बताए ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७४ १६:५०
पुस्तक वार्ता : ‘भ्रष्टाचार मन पराउँदैनौं, तर भ्रष्ट छौं’
पुस्तक पढ्ने केटाकेटी बानीको विकास भइसकेपछि लामो बाटो हिँडिसकेकी छु । अरू कुनै कुरामा मेरो रुचि थिएन । पढिरहन्थेँ रे । घरमा किताब भइरहन्थे । कस्तो खालको किताब भन्ने लिस्टचाहिँ एकदम गज्याङमज्याङ छ । मेरो फुपू बौद्ध भिक्षु हुनुहुन्छ ।
मल्लिका शाक्य नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा अध्यापन गर्छिन् । लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट विद्यावारिधि गरेकी उनले ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री : द कल्चरल पलिटिक्स अफ गार्मेन्ट म्यानुफेक्चरिङ, डिभेलपमन्ट एन्ड रिभोल्युसन इन नेपाल’ शीर्षकमा पुस्तक लेख्दै छिन् ।
पुस्तकपढ्ने केटाकेटी बानीको विकास भइसकेपछि लामो बाटो हिँडिसकेकी छु । अरू कुनै कुरामा मेरो रुचि थिएन । पढिरहन्थेँ रे । घरमा किताब भइरहन्थे । कस्तो खालको किताब भन्ने लिस्टचाहिँ एकदम गज्याङमज्याङ छ । मेरो फुपू बौद्ध भिक्षु हुनुहुन्छ । त्यो बेला फुपूले साक्षरता पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँले सानासाना आकारका किताब र के–के पत्रिका छाप्नुहुन्थ्यो । ती घरमा आउँथे । प्राय: ती किताब बुद्ध धर्मसम्बन्धी हुन्थे । बुवा लेफ्टिस्ट भएकाले त्यस्तै किताब ल्याउनुहुन्थ्यो । केही किताब बुइँगलमा लुकाउनुहुन्थ्यो, हामीले पढ्न हुँदैन भनेर । तर, हामी केटाकेटी लुकी–लुकी हेर्न–पढ्न खोज्थ्यौँ । पञ्चायतताका युधीर थापाजस्ता लेखकका बजारिया किताबहरू मैले सबै पढेँ । किनभने, त्यो बेला धेरै किताबहरूमाथि अ/घोषित पाबन्दी थियो । उमेरसँगै कस्तो किताब पढ्नुपर्छ भन्ने जान्न थालेपछि र प्रजातन्त्र आएपछि जुनसुकै धारका किताब बजारमा देखिन थाले, अवस्था अर्कै भयो ।
उमेर र परिस्थितिअनुसार किताब पढ्ने कुरा फरक हुँदै आएको छ । आजकल बजारमा आउनेबित्तिकै प्राय: किताब पढिहाल्दिनँ । पहिला अरूले पढून् अनि मात्र पढौँलाजस्तो लाग्छ । अहिले महाश्वेतादेवी, निर्मल बर्मा आदि पढिरहेकी छु । छोरीलाई सुनाउन बालकथा पनि पढ्छु । माया एन्जेलोले मातृत्वसम्बन्धी लेखेका किताबहरू सायद सबै आमाहरूले रुचाउँछन् होला । पुस्तक पढ्दा मेरो रोजाइ विविधता खोज्ने खालको छ । एउटा लेखकले लेखेका सबै किताब म कहिल्यै पढ्दिनँ । किनभने, किताब पढ्दा लेखकप्रति अन्धभक्त हुनु पर्दैन वा हुनु हुन्नजस्तो लाग्छ । केटाकेटीमा चाहिँ पढेँ । गोर्की भनेर सबै पढेँ । हरिवंश राय बच्चनका प्राय: सबै पढेँ । अहिलेचाहिँ म दुई–तीनवटा फरक–फरक काममा हात हाल्दै छु र त्यसकारण फरक–फरक विधाका वा विषयका किताबहरू मसँग छन् । दुई तीनवटा एकदमै भिन्दै खालका किताब पढ्छु । कसैले त मेरो किताबको रोजाइ थाहा पाउँदा मल्लिका शाक्य भन्ने मान्छे दुइटा रैछन् क्या हो भन्छन् ।
समकालीन नेपाली समाज बुझ्न मान्छेको आवाज (भोइस अफ ह्युमन) आउने किताब पढ्न मन पर्छ । एकदमै ठूलो (एलिट) भनिएका मान्छेले किताब लेख्छन् तर तिनै किताबमा खास गुदी हुँदैनन् । तर, ‘अटोबायोग्राफी’ भन्ने विधाले किताब लेखनमा नयाँ कुरा आउने सम्भावना जन्माइदियो कि जस्तो लाग्छ । देवेन्द्रराज पाण्डेको लेखाइलाई मान्छेले पढ्न पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
बीपीलाई पुरुष लेखक भनेर पढ्नै सकिँदैन । मञ्जुश्री थापालाई म महिला लेखक भनेर पढ्दिनँ । राम्रो लेखक भनेर पढ्छु । सीमा आभास मलाई एकदमै मन पर्छ । उनी इमानदार भएर लेख्छिनजस्तो लाग्छ । लेख्ने कुरा उनको जीवनबाट आइरहेको छ जस्तो लाग्छ । मञ्जुश्री एकदम इन्साइटफुल लेखकजस्तो लाग्छ । झुम्पा लाहिरी र मञ्जुश्रीको लेखाइ दाँजेर हेरौँ । झुम्पा लाहिरीले जुन ग्लोबल पाठकमाझ आफ्ना लागि ठाउँ बनाएकी छन् मञ्जुश्रीले पनि त्यस्तै गर्ने चाह छ कि जस्तो लाग्छ ।
कविता विधाको कुरा गर्दा नवराज पराजुलीले ‘स्ल्याम पोएट्री’ मार्फत् कवितालाई राम्रो उचाइ दिएका छन् । उनका कविता टुक्रा–टुक्रा–टुक्रा जोडेर बनेका अर्थपूर्ण मोजाइकजस्ता लाग्छन् । विम्बसँग मज्जाले खेल्छन् उनी । गोपालप्रसाद रिमालका कविता ‘इक्लेक्टिक’ छैनन् तर त्यसमा जुन किसिमको आवेग छ, त्यो गाढा छ । त्यसले कहिलेकाहीँ अचम्मको कम्पन ल्याइदिन्छ । श्रवण मुकारुङको कवितामा सायद त्यसको एउटा अंश छ र वाचनको आधारमा भन्नुपर्दा उनको कवितामा ताली पिट्ने लाइन धेरै छन् । उनले बिसे नगर्चीलाई बिउँताइदिए । त्यो कविता पढ्दा लाग्छ, बिसे नगर्ची तपाईंको ढोकै ढकढक्याउन आयो ! वाचन शैली र वैचारिक तहमा भन्नुपर्दा नेपालबाहिरका मलाई मन पर्ने अर्का लेखक राजा पुनियानी पनि हुन् ।
म अहिले गायत्री स्पिभाक पढ्दै छु । उनले महाश्वेता देवीका कथाहरूको अंग्रेजी उल्था गरेका छन् । अहिले मैले पढ्दै गरेको किताब उनैको ‘ब्रेस्ट स्टोरिज्’ नामको हो । त्यसमा, द्रोपदी शीर्षकमा महाश्वेतादेवी भन्छिन्, एउटी आदिवासी–बागी महिलामाथि देशका पहरेदारहरूले उठाउन सक्ने अन्तिम अस्त्र भनेको उनको बलात्कार हो । त्यसको प्रत्यास्त्रमा युवती आफ्नो नाङ्गो आङ लिएर सेनानायकमाथि झम्टन्छे र ललकार्छे, ‘आइज, सक्छस् भने मलाई काउन्टर गर् । तँ मलाई केवल नङ्ग्याउन सक्छस्, मेरो आङ ढाक्ने तेरो हुती छैन किनभने पुरुष होस् तँ ।’ सन्थाल युवती केही अंग्रेजी बुझ्दिनन् । बंगालीमा उनको दखल छैन । तर अंग्रेज उपनिवेशवादीसँग जोडिएको यो ‘काउन्टर’ (वा इन्काउन्टर) शब्द र त्यसको अर्थका डामहरू उनका शरीरभर सचेतनाभर प्रशस्त डामिएका छन् । आदिवासी हेराइबाट हेर्ने हो भने प्रजातान्त्रिक भनिने उत्तर–औपनिवेशिक भारतको राष्ट्रियतामाथि यो बेजोड प्रतीकात्मक प्रहार हो ।
त्यसैगरी महाश्वेता देवीको अर्को कथा दौलतीको व्याख्या गर्दै स्पिभाक सम्झाउँछिन्, पारम्परिक र वर्गीय शोषणमा नराम्रोसँग पिल्सिएकी दौलती बिरामी पर्छे, यौनशोषणका हजारौं चोटहरूले घायल भएर ऊ लडखडाउँदै भौंतारिन्छे । अन्त्यमा, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको पूर्वरातमा कुनै गाउँले शिक्षकले भुइँमा कोतरेर छोडेको भारतको नक्सामाथि गएर लड्छे र मर्छे । भोलिपल्ट गाउँलेले उसको लास देख्छन् । केटाकेटीहरूलाई लाग्छ, सरले अब कसरी भारत पढाउनुहुन्छ ? दौलती त भारतभर छताछुल्ल भएर पोखिएकी छे !
विवेकजीवी कि प्रज्ञाजीवी कि बुद्धिजीवी ?
नेपालको प्राज्ञिक क्षेत्रबारे कुरा गरौं । यो एकेडेमिया भन्ने पेसा नेपालमा अलिक अर्कै भयो । अध्यापनले के दिन्छ भन्ने कुरामा हामी त्यति क्लियर छैनौं किनभने त्यसमा रुचि छैन मान्छेलाई । यो समाजशास्त्रीय ‘अब्जरभेसन’ पनि हो । चैतन्य मिश्र र जगदीश घिमिरेको बहस सम्झन्छु, बुद्ध वा जिजस क्राइस्ट बुद्धिजीवी हुन् कि होइनन् भन्नेबारेमा । बुद्धिजीवी को हुन् भन्ने कुरामा समसामयिक चिन्तन त्यति गहिरो छैन कि ? समाजमा बुद्धि बेचेर जीवन चलाउने मान्छे नै बुद्धिजीवी हुन् भन्ने बुझाइ छ । त्यो मिसलिडिङ कुरा हो । मेरा लागि विवेकको आधारमा मात्रै बाँच्न सक्ने, त्यसबाहेक बाँच्न अन्य कुराको सहारा लिने सम्भावना नै नहुने व्यक्ति नै बुद्धिजीवी हो न कि बुद्धि बेचेर आरामदायी जीवन बिताउन खोज्ने मानिसहरू । कन्सल्ट्यान्टहरूलाई बुद्धिजीवी भन्ने हो भने विवेकको आधारमा मात्रै जीवन बाँच्ने व्यक्तिलाई बुद्धिजीवी भन्न सकिँदैन । अरू नै शब्द चाहिन्छ । ‘नलेज ब्रोकर’ भन्नु र बुद्धिजीवी भन्नु फरक कुरा हो । सायद फरक विवेकजीवी, प्रज्ञाजीवी र बुद्धिजीवी हुनुमा छ ।
महिला हुनुका कुरा
कक्षाकोठाका छलफलमा विद्यार्थीहरू चाखले आफ्ना कुरा राख्छन्, अरूका कुरा सुन्छन् । दक्षिण एसियाली महिलाहरू पनि छन् मेरा विद्यार्थी । खासगरी महिला छात्राहरूको वार्डेन हुनुको नाताले महिला विद्यार्थीहरू मेरा छिमेकी पनि हुन् । मेरो सम्पूर्ण जीवन विद्यार्थीहरूको अगाडि खुलेको छ । बुर्का लगाएर पूरै शरीर ढाकेर हिँड्नेदेखि एकदमै निस्फिक्री भएर हिँड्ने विद्यार्थी पनि छन् मेरा । हामीकहाँ त्यसैले महिलाहरूको सवालमा दक्षिण एसिया एकदम विविधतापूर्ण पनि छ, उस्तै पनि छ । श्रीलंकामा भन्दा भुटानमा महिला हुनुको नियति एकदम फरक छ । दिल्लीका महिला ‘इम्पावर्ड’ भए पनि उनीहरू भन्छन्, हामी इम्पावर्ड भए पनि महिला हुनुको संघर्ष हामीले गरिरहनु नै पर्छ ।
खासगरी, देश र महिलाको कुरा गर्दा अफगान राष्ट्रवाद, भारतीय, भुटानी, नेपाली आदि राष्ट्रवादको कुरा कक्षाकोठामा एकै ठाउँमा बसेर गर्दा एकदम घनीभूत छलफल हुन्छ । तालिबान आउनुभन्दा पहिले हुर्किएका महिला पुस्ता एकदम ‘कस्मोपोलिटन’ छन्, उनीहरू एकदम आधुनिक थिए, भलै केही कुरा गुमाए पनि होला जुन तालिबान आएपछिका महिलाले गुमाउनु परेन । भुटानको महिलावाद छुट्टै छ । त्यो सचेतनाको असर नराम्ररी पिल्सिएका महिला पुस्ताको मनभित्र पनि छ र तालिबानको अन्त्यपछि त्यो पुरानो सचेतना सम्बन्धमा नयाँ छलफल सुरु भएको पनि जस्तो छ । यसको तुलनामा के भन्नुपर्छ भने नेपालमा महिलाले हाम्रा आमाहरू, हजुरआमाहरू स्वतन्त्र थिए भनेर सोच्ने ठाउँ कतै छैन । हाम्रो मानसिकतामा यो एउटा बाधक हो र यसका लागि नयाँ पुस्ताले अझ बढी वैचारिक संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
मलाई यो भन्नुपर्दा दु:ख लाग्छ, नागरिकताको सवालमा सबैभन्दा कन्जरभेटिभ त नेपाल र भुटान हो । अफगानिस्तान र पाकिस्तान होइन । यी कुरामा छलफल हुन्छन् । एकदमै फरक–फरक सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यका विद्यार्थीसँग छलफल गर्न पाउँदा कहिलेकाहीँ त आफू विद्यार्थी नै भएर सुन्दा आनन्द आउँछ । यसले पढ्ने र पढाउनेबीचको सम्बन्धलाई सजिलो पनि बनाउँछ ।
जय छाङ्छाको एउटा कविता छ जसको सार यस्तो छ :
गाउँ छाडेर जाँदा तिम्रो माया गाउँजत्तिकै ठूलो लाग्यो
देश छाडेर गएपछि देशजत्रै लाग्यो तिम्रो माया
म पनि जब देशबाहिर गएँ त्यो बेला देशप्रतिको लगाव झन् बढ्ने रहेछ । मलाई पनि त्यस्तै भएको थियो । नेपालबाहिर गएपछि मैले लेख्ने काम अलि बढी गर्न थालेँ । २०६३ पछाडिको नेपाली समाजको परिवर्तनप्रतिको भोक एकदमै गजबको थियो । अब अहिले सायद त्यसको १० प्रतिशत मात्रै छ होला । कुनै बेला हामी सजिलै दलित, महिला, जनजाति कसैलाई अन्याय हुनु हुँदैन भन्थ्यौं । सजिलो थियो । तर, अब त्यही वाक्य बोल्न मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ । सार्वजनिक बहसका कार्यक्रममा मैले त्यस्तो महसुस गरेकी छु । यो कुरा भ्रष्टाचारसँग सीधै जोड्न सकिन्छ । हामीलाई करप्सन मन पर्दैन तर हामी सबै करप्ट छौं । यो बेमेललाई कसरी बुझ्ने ?
हाम्रा सामाजिक संस्था कामलायक छैनन् भनेको पनि होइन तर जब हामीसँग अभाव हुन्छ त्यो बेला ‘ए त्यसको महत्त्व यस्तो रैछ’ भनिन्छ । संसद्को महत्त्व त्यो भंग भएपछि चेत खुल्छ । गोविन्द केसीको अनशन पनि यही कुरासँग जोडिएको छ । डाक्टर भन्ने पेसाका मान्छे कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चेत खुलेपछि मात्रै हामी गोविन्द केसीको अनशन बुझ्छौं । हरेक वर्ष बाढी आएर मान्छे डुब्छन्, त्यही बेलामा मात्रै मान्छे जुर्मुराएका हुन्झैँ गर्छन् ।
अब सामाजिक आन्दोलन होला भन्ने हुन्छ । तर, मनसुन सकिएपछि त्यो सबै सेलाउँछ । अर्को वर्ष पनि मनसुनले घर बगाएपछि हामी बल्ल जुर्मुरिन्छौं । हाम्रो बोलीको जवाफदेहिता नेताको तहमा मात्रै होइन, हाम्रै परिवारमा पनि छैन । यस्ता कुराले समाजका केही पक्षको संकेत गर्छ । भारतमा पनि यस्ता घटना सुरु हुँदा नहुँदै बलियो आन्दोलन सुरु भइसक्छ । केसीको अनशनको महत्त्व बुझेपछि हामीलाई खेद हुन्छ । तर त्यो खेद पनि सायद व्यक्तिपरक छ । तर त्यो एउटा सामाजिक आन्दोलन भएर उर्लन सकेको छैन ।
हरेक देशको इतिहासको धेरै एपिसोडहरू हुन्छ । तर हरेक देशले देशनिर्माणको क्रममा अवश्यम्भावी रूपमा गर्नु नै पर्ने केही जरुरी एपिसोड हाम्रोमा भएन वा हुन सकेको छैन । मूलभूत समस्या पत्ता लगाएपछि र त्यसको जरो उखेलेपछि फेरिफेरि आन्दोलन र परिवर्तन गरिरहनुपर्ने जरुरी हुँदैन । भारतमा पनि १९४७ भन्दा अगाडि एकदम धेरै तहमा आन्दोलनहरू भएका थिए । तर, १९४७ पछि ठूला आकारका भएनन् । सायद जरुरी भएन ।
देश भनेको के हो ? भन्ने सवालमा धेरै चिन्तन भएका छन् । खासगरी अठारौं शताब्दीका नयाँ देशहरू, अमेरिका, फ्रान्स गणतन्त्र भएको क्षण र अन्य विश्व परिस्थितिमाथि अध्ययन गर्दै एन्डरसनले आधुनिक देशहरूको जड तीमाथिको सार्वजनिक काल्पनिकीमा अवस्थित छ भनेर भनेका छन् । भारतका सबाल्र्टन अध्ययनका विचारकहरू, जसमध्ये स्पिभाकको नाम उल्लेखनीय छ, तिनले भारतीय राष्ट्रियतासम्बन्धी बनाइएका काल्पनिकीहरूमाथि जमेर बहस गरेका छन् ।
त्यसपछि उत्तर–सबाल्र्टन भन्ने बहस पनि हुँदै आएको छ । यी किताबहरू पढेर अहिलेको नेपाल देशको बारेमा सोच्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीभित्र, हरेक नेपालीभित्र, आफ्ना पूर्वाग्रहको व्यक्तिगत मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । सायद कुनै बेला यो सम्बन्धमा बुद्धिजीवी–विवेकजीवीहरूबीच पनि छलफल हुन थाल्नेछ । म भन्छु, आशिष नन्दी, पार्थ चटर्जी, दीपेश चक्रवर्तीका किताबहरू सायद नेपाली पाठकले पढ्नलायक छन् । अफ्रिकाबाट म अचिल म्बेम्बे र महमुद माम्दानीको नाम लिन्छु । साथै, किथ हार्ट मेरा पनि जो मेरा प्रिय गुरु पनि हुन् ।
खोइ सामाजिक/आर्थिक न्यायका मुद्दा ?
मलाई सामाजिक न्यायका कुरा आवश्यक लाग्छन् । र आर्थिक न्यायका पनि । नेपाल यी दुवै कुरामा एकदमै पछाडि छ । सामाजिक न्यायका केही मुद्दा हामीकहाँ सुरु नै भएका छैनन् जुन अमेरिकालगायतका मुलुकका नागरिकले ‘अब पुग्यो’ भनिसके । हामीले सामाजिक तहमा देश निर्माणको चरण पूरा गरेका छैनौं । नेपालले त्यो देखेकै छैन । त्यो देख्दै नदेखीकन हामीकहाँ ‘नियो लिबरालिजम’ आइसक्यो । त्यो धान्नै नसकिने भ्यागुते उफ्राइ हो । त्यो बेला राजाले बनाइदेलान् भनियो । बनाइदिएनन् । अब कसले बनाउने ? त्यो बहस भएकै छैनजस्तो लाग्छ । नेपालमा सामाजिक आन्दोलन आएकै छैन ।
(सिपी अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)